Shiinaha UV koronto, tarjumaha biyaha, shinni daabacida burushka timaha oo ay weheliso warshad wax lagu maareeyo oo loogu talagalay iyo soo saarayaasha | Yongsheng
UV koronto, tarjuma biyaha, shuminta burushka timaha ee daabacan oo leh qalab loogu talagalay
Midabka: Dahab ， Buluug ， ubax… Habayn.
Qaab Qaali ah + Barkin jilicsan oo la jajabinayo + Xadhko Cunno Dabiici ah + Nylon Soft Soft. Waa mid jilicsan oo madaxaaga iyo timahaaga siinaysa qaboojiye dabiici ah adoo adeegsanaya farsamooyin la isticmaali jiray qarniyo. Markay cowsku hagaajiyaan timahaaga, cufnaanta naylonka ee dheeraynaya, adag hadana jilicsan oo gaadhaya madaxaaga oo dhan halgan la'aan, adigoo salaaxaya inch kasta oo madaxaaga ah. Dhamaan qaababka madaxa ayaa loo isticmaali karaa shaashadeena.
Burush wareeg ah oo loogu talagalay qalajinta Dumarka iyo Ragga iyadoon loo eegin qaabka timaha, Burush wareegsan oo leh waxqabad badan Si kasta oo aad u rabto Wareeg, Wareeg ama Burush Toosan. Burush habeyn heer sare ah oo tayo sare leh ayaa kaa caawin kara inaad toosiso oo aad laabto waxa daruuriga u ah salon & guri. Burushka timahaani waxay kufiican yihiin timo dhaadheer ama gaaban, isku laabma ama toosan, dhumuc leh ama fiican. Burushkayaga ayaa loo naqshadeeyay inay ku socdaan nooc kasta oo timo ah oo ka jaraya finanka inta timaha u jilicsan yihiin. Waxay ku shaqeysaa si weyn Timo qoyan ama qalalan waxayna kufiican tahay ragga, haweenka iyo caruurta.
Burushka timahaani waxay noqon karaan daabacaad koronto ee UV, oo leh ubax, daabacaadda wareejinta biyaha alwaax ah, oo dhalaalaya daabacaad midab leh. Naqshadeynta gaarka ah ee burushku ku habboon yahay xafladda iyo hadiyadaha. Waxaan haynaa kudhowaad 20 naqshadood oo jira. Sidoo kale naqshadeynta waa la qaabeyn karaa. Waxaad soo bandhigi kartaa naqshad aad iska leedahay oo aan si adag u ixtiraameyno asturnaanta alaabtaada.
Hore: Dahaarka caag, UV koronto, daabacaadda shinnida, wareejinta biyaha burushka timaha oo leh muraayad Intelliflex ah
Xiga: Burush timaha daahan Rubber leh daabacaad midab leh gacan qabashada design
Burushka Timaha Jumlada
Burush timaha caaga
Burushka Timaha Caaga ah
Burushka timaha caaga
Burushka Timaha Rubber
Burushka Timaha looxa
Dahaarka caag Color burush timo classic leh de ...